WK – Page3– GuGuGarGar
By WKPosted on February 9, 2020
ထိုင်း နိုင်ငံ နခွန်ရတ်ခ်ျစီမာ ပြည်နယ် ခိုရတ်မြို့ နယ် အမှတ် ( ၂ ) တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် လက်အောက်ခံ အမှတ် (၂၂ ) ပိတ်ဆို့ရေးတပ်မှ အသက် ၃၂ အရွယ် လက်ဖြောင့်တပ်ကြပ်ကြီး […]
အောင်လအန်ဆန်ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲ အဖြစ် နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရစ်ဒါနှင့်ထိုးသတ်ရမည်
ONE မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ မြန်မာနိုင်ငံသား အောင်လအန်ဆန်သည် ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲ အဖြစ် နယ်သာလန်နိုင်ငံသား ဒီရစ်ဒါနှင့် ထိုးသတ် ရမည်ြ ဖစ်သည် ။ ” ONE Championship ” သည် ကျင်းပမည့် […]
ထိုင်း ဆိုသည်မှာလည်း မဖြစ်ရင်လည်း ဘာ မှ မဖြစ်ဘူး..ဖြစ်လိုက်ရင်လည်း အကြီး အကျယ် ပဲ.. ဇာတ်လမ်း ကိုပြောပြရရင် ထိုင်းစစ်သားလေးက သူ့ချွေးနှဲစာ ကရတဲ့ လစာငွေနဲ့ မြေကွက်ဖိုးသွင်းထား တဲ့ ဘတ်ငါးသောင်းကို သူတို့ တပ်မှူးကတော် […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အခုဆိုရင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေ သိုလှောင်ထားနိုင်မှုဟာ လျော့နည်းကျဆင်းလာနေပြီ ဖြစ်တယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံး မှာ mask တွေ နဲ့ အကာအကွယ်ပစ္စည်းသိုလှောင်မှုက WHO နဲ့ အခြားမိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေ ရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပြည့်မီအောင်ရှိမနေတော့ဘူး ။ ဒါဟာ […]
စင်္ကာပူတွင် မြန်မာအိမ်အကူ ညီမလေးတစ်ယောက် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံလိုက် ရပြီ
By WKPosted on February 9, 2020 February 9, 2020
အောက်ပါ ပို့စ် မှ အိမ်အကူညီမလေး ယနေ့မ နက်အစောကြီး ဆက်သွယ်လာ ပါတယ်။ သူမ ရဲ့အိမ်ရှင် က သူဖျားနေတာ လည်ပင်းနာနေတာ ကို ဆေးခန်း မသွားခိုင်းကြောင်း သူမ ရဲ့ အိမ်ရှင်က လည်း […]
အနှစ်( ၁၀၀ ) လျှင် ( ၁ )ကြိမ် ကမ္ဘာကြီးက လူသန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီလား..?
” တိုက်ဆိုင်မှုလား..၊ ထူးဆန်းမှုလား..? ဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှု အသီးသီးအရ မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ် ဆိုတဲ့ အချိန်ရောက်ပြီလား.မသိပါ.။ ” အတိတ် သမိုင်းဖြစ်ရပ်များကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါ အနှစ် ၁၀၀ လျှင် တစ်ကြိမ် ကပ်ရောဂါများဖြစ်ပွားပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံး လူသန်းနဲ့ချီ […]
By WKPosted on February 8, 2020
ထိုင်း တွင် အထက်အရာရှိနှင့် အဆင်မပြေသည့် စစ်သားတစ်ဦးက Facebook Live လွင့်၍ သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကနဦး ၁၂ ဦးသေဆုံး ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ခိုရတ်ဒေသတွင်ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ) ထိုင်းစံတော်ချိန်ည […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုသည် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသည့် သင်းခွေချပ်ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိ.
မျိုးတုံးပျောက် ကွယ်လု နီးပါးဖြစ်နေ သည့် သင်းခွေချပ် သည် တရုတ်နိုင်ငံ တစ်ဝန်းတွင် နိုဗယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှု ကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည့် ကွင်းဆက်ဖြစ်နိုင် သည် ဟု တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်များ က ဖေဖော်ဝါရီ […]
” ရန်ကုန် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်က ဂျင်းတွေ နဲ့ တည်ဆောက်နေသော မပြီးသေးတဲ့ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ယာ…”
“” ဂျင်းတွေ နဲ့ တည်ထားတဲ့မြို့ …”” ရန်ကုန် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် က မပြီးသေးတဲ့ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ယာ စီမံကိန်းက အိမ်ယာအခြေေ န ကို တန်ဖိုးနည်း အိမ်ယာ တင်ဒါဆွဲဖို့ သွားလေ့လာတဲ့ အခါ… […]
ဝူဟန် ကို ကြောက်တဲ့ပြည်သူတွေ ဝူဟန် မကုဘူးတဲ့ အထွေထွေဆရာဝန် တွေ အထူးကု တွေ စဉ်းစားပုံတွေကို တနည်းတဖုံ အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ နာမည်ကြီး Lancet ဂျာနယ် က မှီငြမ်းမှု အများဆုံး ဆောင်းပါးတခု ကို […]